MUUQAAL + SAWIRRO: Qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Real Madrid oo qasay shirkii jaraa’id ee Zinedine Zidane, kaddib guushoodii UEFA Super Cup – Gool FM
“Bale iyo Zidane waa inay noqdaan sida ragga oo kale”
Juan Mata oo shaaca ka qaaday sababaha ku kalifay inuu sii joogo Manchester United
Chelsea oo dhabar jab xoogan la kulmeysa kahor kulanka Premier League ee Norwich City
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Liverpool vs Arsenal ka hor kulankooda habeen dambe ee Premier League… (Reds oo xiddigaha ugu badan ku leh)
MUUQAAL + SAWIRRO: Qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Real Madrid oo qasay shirkii jaraa’id ee Zinedine Zidane, kaddib guushoodii UEFA Super Cup
Haaruun August 10, 2016
(Madrid) 10 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 3-2 uga adkaatay 10 ciyaaryahan oo ka tirsan naadiga ay ku xafiiltamaan Spain ee Sevilla, waxaana ay sidaasi ku hanteen Super Cup-ka Yurub.
Dani Carvajal ayay Real Madrid goolka guusha uga mahadcelinaysaa daqiiqaddii 119’aad ee ciyaarta, goolkaas uu dhaliyey xilli dambe ayaana sabab u noqday in kooxda cad-cadku koobka gacanta ku dhigto.
Qaar ka mid ah xiddigaha Real Madrid ayaa guushaas kaddib waxa ay arbusheen shirkii jaraa’id ee tababarahooda Zinedine Zidane.
Xiddigahaas qasay shirka macallin Zidane waxaa ka mid ahaa Ramos, Marcelo iyo Alvaro Morata iyo kuwo kale.
Kabtan Sergio Ramos ayaa la arkayey isagoo garaacaya miiska uu shirka jaraa’id ku hayey Zidane, halka qaar kale oo xiddigaha kooxda ka mid ah ay biyo dusha uga shubayeen tababaraha reer France si ay ugula dabaal deggaan guushooda Super Cup-ka Yurub.
This just happened 😂#SuperCup pic.twitter.com/gLHupSSpCR
Cristiano Ronaldo oo ugu hambalyeeyey xiddigaha kooxdiisa Real Madrid hanashada Super Cup-ka Yurub
XANTA SUUQA: Arsenal oo qorsheynaysa inay la soo wareegto weeraryahanka Man City ee Wilfried Bony